China Digital okpomọkụ N'ihe Kọntaktị Infrared Sensọ STP9CDITY-300 ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ya | Anwu
Digital okpomọkụ N'ihe Contactless Infrared mmetụta STP9CDITY-300
STP9CDITY-300 bụ otu ọwa dijitalụ infrared okpomọkụ thermopile sensor nke na-eme ka ịdị mfe nke mmụba mmụba na-enweghị kọntaktị n'ime ọtụtụ ngwa. N'ime obere ngwugwu TO-5, ihe mmetụta ahụ na-ejikọta ihe mmetụta thermopile, ampilifaya, A / D, DSP, MUX na usoro nkwukọrịta. STP9CDITY-300 bụ ụlọ ọrụ emepụtara n'ụlọ ọrụ dịgasị iche iche: -40 ~ 125 ° C maka ọnọdụ ihu igwe na -20 ~ 300 Celsius C maka ihe ọkụkụ ahụ. Ọnụ ọgụgụ a tụrụ atụ dị na okpomọkụ bụ nkezi nke ihe niile dị na Field of View of the sensor. STP9CDITY-300 na-enye ọkọlọtọ ziri ezi nke ± 2 Celsius C gburugburu ụlọ okpomọkụ. Igwe ntanetị dijitalụ na-akwado ntinye dị mfe. Ntinye ego ya dị ala na-eme ka ọ dị mma maka ngwa batrị, gụnyere ngwa eletriki ụlọ, nlekota gburugburu ebe obibi, HVAC, njikwa ụlọ / ụlọ na IOT.
Dijitalụ Far Infrared Thermopile sensor na ịgụ - si na IC nke na-atụle ọnọdụ okpomọkụ nke ihe na-enweghị mkpa ịkpọtụrụ. Ihe mmetụta a na-eji thermopile iji tụọ ike Far Infrared sitere na ihe a na-atụle ma jiri ngbanwe kwekọrọ na thermopile voltage iji chọpụta ọnọdụ ihe. Sensọ a na - achọpụta ọnọdụ ihe site na -40 ℃ ruo + 125 ℃ iji mee ka iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ ebe. A na-eji interface I2C iji kwurịta okwu na ngwaọrụ a maka ngwa dị iche iche.
Ọ na-ebe-eji na-abụghị kọntaktị okpomọkụ N'ịchọpụta, dị ka okpomọkụ nlekota oru, Nkasi obi Index mmesho, Ike Management usoro, Thermometers, Ahụike; na Nchọpụta Ahụ Mmadụ, dị ka Njikọ Ike mmekọrịta, Akwụkwọ njikwa nleba anya, Njikwa unit Lighting, Ngosipụta njikwa panel.
Digital okpomọkụ mmepụta
Factory calibrated na mbara okpomọkụ àmà
Nkwurịta okwu protocol na Easy mwekota na
Na-eme ka ọnụ ọgụgụ sistemụ belata
150 μA Ike dị ala na 2.5 V ka 5.5 V Nweta Nweta Volta
Home ngwa oru na-abụghị kọntaktị okpomọkụ akara
High nkenke na-abụghị kọntaktị okpomọkụ mmesho
Nke gara aga: Elugogoro na-enweghị kọntaktị ọnọdụ okpomọkụ infrared Sensor STPSMD38
Osote: Integrated ASIC AFE Thermopile IR Sensor Na-enweghị kọntaktị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na thermometer STP10DF35G1